Ururka Center for Education and Development – ​​​​​​​​Somalia Stability Fund
Ururka Center for Education and Development
Center for Education and Development (CED) waa Urur Soomaaliyeed oo ka shaqeynayey Soomaaliya tan iyo 1992dii. CED oo xaruntiisu tahay Muqdisho waxaa uu laamo ku leeyahay gobollo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah. Ururku waxaa uu dhiirrigeliyaa in maciishad joogto loo helo isaga oo u maraya sameynta iyo hirgelinta siyaasado horusocod ah oo dhinac waxbarashada iyo horumarka ay bulshadu hormuudka u tahay ah.
CED waxaa uu wada-hawlgal/iskaashi jira oo wax-soo-saar leh la leeyahay kuwo kala duwan oo ay arrintu kheyso, sida Dowladda Federaalka ah, wakiillo bulshada ka socda, maamullada degaanka, ganacsiyada/hay’adaha gaarka loo leeyahay iyo dhallinyarada. Ururku waxaa uu hadda mashruuca
the Community and Youth Based Economic Recovery and Stabilization (CYBERS) ka fulinayaa degaannada dhowaan la xoreeyey ee gobolka Shabeellaha Hoose.
CYBERS waxaa uu higsanayaa in uu dhiso kartida dhabta ah ee dhallinyaradu ay ku soo saari karaan dakhli, taas oo ay xuddunta u tahay xiriirka sii hagaajinta dalagga beeraha iyo xirfadaha kobcinta ganacsiyada ee miyiga. Hawlaha lagu kobcinayo xirfadaha gaarka ah waxaa lagu kaabayaa iyada oo la bixinayo adeegyo lagu kobcinayo ganacsi, lagu dhisayo iskaashatooyin beeraley ah oo dibna loogu dayactirayo hantida kaabayaasha muhiimka ah ee dadweynaha – kanaallada, waddooyinka ku soo xira waddada weyn, ceelasha iyo suuqyada.
Iyada oo loo marayo hindise hal-abuur ku yimid oo ay isku kaashanayaan NGO iyo ganacsi gaar loo leeyahay ayaa CED oo kaashanaya
Somali Green Initiatives & Technology (SOMGIT), waxaa uu taageereyaa mashruuc waraabka ee dhibcaha biyaha ee qofku uu kireysanayo qalabka marka dambena yeelanayo ee SOMGIT ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Tani ayaa CED u oggolaaneysa in uu dhallinyarada baro hababka cusub ee beerashada, isaga oo isla markaana ka faa’iideysanaya xiriirka dhow ee uu la leeyahay bulshada degaanka in ay SOMGIT oo xaruntiisu tahay Muqdisho uu ku caawiyo in uu kalsooni ka helo macaamiishiisa mustaqbalka.
Iyada oo uu sameeyey hawlo degdeg loogu dayactirayo kaabayaasha iyo kuwo lagu kobcinayo xirfadaha beerashada ayaa barnaamijka CYBERS waxaa uu abuuri doonaa fursado shaqo oo muddo gaaban socda isaga oo isla markaana sii wanaajinaya kartida muddada fog ee dadka degaanka, maciishad joogto ah iyo shaqo-abuur. Barnaamijku waxaa sidoo kale loo qaabeeyey in uu dhallinyarada ku hawlgeliyo sii wanaajinta hantida kaabayaasha ah iyo hababka xallinta colaadda si taasi ay gacan uga geysato xasilinta iyo nabad-dhisidda Shabeellaha Dhexe.
Stability Fund waxaa uu ku faraxsan yahay in uu la shaqeynayo CED si uu bulshooyinka Shabeellaha Dhexe uga gacan uga siiyo sidii ay dib ugu soo nooleyn lahaayeen kaabayaasha dadka ka wada dhexeeya ayna u abuuri lahaayeen maciishado cusub iyada oo loo marayo barnaamij horumarin oo ay dhallinyaradu hormuud u yihiin. Sanduuqu waxaa uu sidoo kale uu CED kala shaqeynayaa sii wanaajinta nidaamyadiisa maaliyadeed iyo kuwa kale ee maareynta halista si uu ururkaa gacan uga siiyo si uu maaliyado kale uu mustaqbalka uga helo deeq-bixiyeyaal, halkii uu ku tiirsanaan lahaa qandaraas-hoosaadyo uu ka helo NGO-yada caalamiga ah.